အိန္ဒြာ: 12/1/09 - 1/1/10
၂၀၁၀ သို့ ရောက်လေပြီ
Idea မဂ္ဂဇင်း(ဇန်န၀ါရီ-၂၀၁၀ အမှတ်၁၀၂)
ရင်သွေးသာ လက်ရသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြေ
အမေဆိုတာ အယူဝါဒနဲ့ ခံယူချက်တွေမွေးဖွားသူ
အမေဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ နိသျှရကိုမွေးဖွားသူ
အမေဆိုတာ အနုပညာနဲ့ သူရဲကောင်းတွေ မွေးဖွားသူ
အမေဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ခေတ်စနစ်ကိုမွေးဖွားသူ
ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တော်လဲသံ အဆုံး ဖြစ်တယ်..
အမေတွေဟာ လမ်းခင်းကျောက်စရစ်ခဲက အစ ပြည်တန်ပတ္တမြားအထိဖြစ်တယ်
အမေတွေဟာ ပရိုင်းမိတ်ရုပ်ကြွင်းကအစ ပုံတူမျိုးပွားသန္ဓေသားအထိဖြစ်တယ်
အမေတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အမိုးအကာဖြစ်တယ်
အရေးအန္တရာယ်မှာ ကိုယ့် ဥကိုယ် ကိုက်ချီထားတဲ့ အမျိုး
အမေဆိုတာ ကိုယ့်အရေခွံ ကိုယ်ဆွဲဆုတ်ပြီး
မာရီအင်တွိုင်းနက်နဲ့ မာသာထရီဇာ ခိုဝင်ဖူး
ဟစ်တလာနဲ့ မဟတ္တမဂန္တီတို့ ခိုဝင်ဖူး
ကင်ဂျုံအီနဲ့ အေဗရာဟမ်လင်ကွန်းလည်း ခိုဝင်ဖူး
စောလူးမင်းနဲ့ မင်းကျန်စစ်လည်း ခိုဝင်ဖူး
ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း ခိုဝင်ဖူး..
အမေတွေက သူ့ ရင်သွေးမောင်းနှင်သွားရာ သမိုင်းကြောင်းကို
အမေတွေက သူ့ ရင်သွေးရဲ့စာမျက်နှာပေါ်က
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ည
သူဝမ်းရည် စပ် မစပ်ဆိုတဲ့ကံစမ်းမဲလိပ်ကို
အောက်က ကဗျာလေးကတော့ မောင်ငယ်ကဗျာဆရာ တည်ရမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
တည်ရရေ ကျေးဇူး အထူး
လိုင်းအတိုအရှည်ဆိုတာ အကွာအဝေး အနီးအဝေး ဆွဲဆန့်ခြင်းတရားဖြစ်တယ် မအိန္ဒြာ
တစ်ကြောင်းချင်းဆို… တစ်ကြောင်းချင်း ဆင်းဆင်းသွား
ပြီး တက်တက်လာ တစ်(၁)နေ့ တစ်(၁)ခြား ကမ္ဘာကြီးဟာ
ဘာကြားသေးလဲ ဘာထူးသေးလဲ အသက်ရှူပုံ မမှားဘူး ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်သွားတယ်
ဒီနေ့ အလုပ် များတယ် ထိုကြောင့် ခေါင်းကိုက်တယ်
တိမ်ရိပ်တွေ တစ်ရိပ်ပြီး တစ်ရိပ်
တစ်ကြောင်းပြီး ရင် တစ်ကျောင်း
ဒီအချိန် ဖုန်းမြည်သံ မအားလပ်သေးပါ
ဒီအချိန် အိမ်မြှောင်ဟာ နံရံမှာ
ထမင်းစားပြီး အချိုတည်းပါ အိမ်သာသုံးပြီး လက်ဆေးပါ။
မီး ဂရုစိုက်ပါ စကားပြောဆင်ခြင်ပါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဟာသတချို့မှာ မပျက်မကွက်
ရွာရန် ရွာနှုန်း ကိုးဆယ့်ကိုးမှ
ဘောလုံးအသင်း တစ်သင်းဆိုတာ ပန်းတစ်ပွင့် ပွင့်သလို
ကန်လန်ကာဖွင့်ရုံ မိုးလင်းမသွားဘူး မနက်ခင်းကို ။ ။
အမေများနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေခဲ့တဲ့ ဒီမွေးနေ့ က အမှတ်တရရှိချင်စရာတွေသိပ်များနေပါတယ်.။
ကိုယ်တိုင်ရေးမယ် စိတ်ကူးနေမိတဲ့ ဒီကဗျာလေးကို
ကိုရင်ငြိမ်းတို့က အမေများနေ့အတွက်အွန်လိုင်းကဗျာစာအုပ်လေး လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ချရေးဖြစ်သွားပါတယ်..။
မေမေဖတ်ရရင်တော့ နားမလည်ပါဘူးအေ လို့ ပြုံးဖွဖွညည်းညူဦးမှာသေချာပေမယ့် ကြည်နူးကျေနပ်နေမှာပါ..။
စိတ်ဓါတ်တွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရင့်ကျက်လာသလား မသေချာပေမယ့် အသက်ကတော့ တစ်နှစ်ကြီးသွားခဲ့ပြန်ပါပြီ..။
ဒီကဗျာလေးကို အွန်လိုင်းကဗျာစာအုပ်မှာ ပန်ဒိုရာက သရုပ်ဖေါ်ပုံလေးဆွဲပေးခဲ့ပြီး ၊
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တစ်ထပ်တည်းကျလို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းသာကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
at 6:59 AM 31 comments:
မနက်စောစောအိပ်ယာထ ကိုယ်နဲ့ ခရစ်စမတ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်
ကဗျာဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ဒီလိုချိုးကွေ့ အဆုံးသတ်သွားတယ်
မိတ်ဆွေတို့ကို အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးဖို့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဒါ ကိုယ့်ဖောမက် ပဲ
ဖတ်ဖတ်မမောခင် မောလ်ထဲမှာ မျောနေအုန်းတော့
ဆုတံဆိပ်တွေ သူ့အကြောင်းဒေါ့ကယူမင်ထရီ်။ ဘာလို့ တို့အတူတူနေခွင့်မရတာလဲ
မိုးကာလျက် စမ်းသပ်ချက် နောက်ဆက်တွဲ
နောက်တွဲအရှည်ကြီးနဲ့ မပြီးဆုံးနိုင် မီးခိုးတလူလူ
ဒီနေ့ ခရစ်စမတ်နေ့ ရုံးတွေ ကျောင်းတွေပိတ်တယ်
အတိုအပြတ်တွေ ပြန်ခေတ်ထ လာတော့
လွတ်ထွက်သွားမှာကို အသားလွတ် ကြောက်နေတယ်
အိတေး လာဗီမိုးရ် ကဒ်ထူဖုံး စာအုပ်အထူကြီး ပြတယ်
ကွာယာ သံပြိုင်တေးသီချင်းနောက်ခံမှာ ပြတယ်
ဒါ ကိုယ့်ဖောမက် ပဲ
ဖဲကြိုးရောင်စုံတွေ သက်တံ ရှုံးလောက်အောင် ပလူပျံနေတာ
နောက်… စကားဟေးလ်မှာ သူနဲ့အချိန်းအချက်
၂၅၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ (ခရစ်စမတ်နေ့) စင်္ကာပူစံတော်ချိန် ၈း၄၉ နာရီ
မေးလ်ကနေ ကဗျာဆရာဦးခင်အောင်အေးပို့လိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေးကို ပြန်ပြီးလက်ဆောင်ဝေငှပေးလိုက်တာာပါ။
"သုခရိပ်မြုံ " က တာထွက်လာပြီလေ..
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခံ ကလေးသူငယ်များအတွက်
၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉ အင်ယားကန်စောင်း စိမ်းလန်းစိုပြေဥယျာဉ်မှာ
DOI ( Dream Of Inferior Poretry Club) မှ ကဗျာဆရာလူငယ်တွေစုစည်းပြီး..
အလင်းပျိုးမယ့်လက်ဆိုတဲ့ စာနာမှု ကဗျာရွှတ်ပွဲလေးတစ်ခု စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
စုစုပေါင်း ကဗျာ(၁၃)ပုဒ် ရွတ်ဆိုကြပြီး ကဗျာချစ်သူများပါ ပါဝင်နိုင်တဲ့
ပါဖောင့်မန့်အတ် ကဗျာကိုလည်း စုစည်းရေးစပ်ခဲ့ကြတယ်…
HIV .. သရုပ်ဖော်.. ပြကွက် တစ်ခုကို ပါဝင်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေကို သုခရိပ်မြုံ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာကို လှူဒါန်းကြမယ်လို့
အဲဒီ့ကဗျာရွတ်ပွဲမှာ မင်းယွန်းသစ်က ဒီကဗျာလေးကို ရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Blog တစ်ခု Website တစ်ခုဆိုတာထက် မြန်မာကဗျာလောကအတွက် အခြေခိုင်ဆုံး အုတ်မြစ်တစ်ခု ချလိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
Burmese Poetry Foundation ဆိုတဲ့ ဘလော့နဲ့ တစ်ခု မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကဗျာတွေ မြန်မာတွေသိအောင် မြန်မာကဗျာတွေ နိုင်ငံတကာက ဖတ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ မြန်မာကဗျာဆရာတွေရဲ့ကဗျာတွေကို ကြိုးစားစုဆောင်းပေးထားတဲ့ Foundation တစ်ခုအဖြစ် ၀မ်းမြောက် အားတက်ဖွယ်ရာ ဖတ်မှတ်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်..။ ထူးထူးထွေထွေ ပြောနေစရာမလိုဘဲ ဘလော့ကို ၀င်ကြည့်ရုံနဲ့ ခန့်ချင့်တွက်ဆနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.။ ဒီ့ထက် ကြီးမားလေးနက်တဲ့ ခန့်ညားသေသပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ Website တစ်ခုအဖြစ်ပါ အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ စီးဆင်းလာလိမ့်ဦးမှာပါ.။
" မြန်မာကဗျာ ရေစီးကြောင်းတစ်ခုလုံးကို သိမ်းကြုံး ထည့်သွင်း နိုင်မယ်လို့ မဆိုလိုဝံ့ပါ။
ကဗျာအပေါ် ချစ်ခင်စွဲလမ်းမိတဲ့ စိတ်တူသူ ဇောအဟုန်တူသူ လူလတ်ပိုင်းနှင့် လူငယ်တို့ရဲ့
အိပ်မက် ဖလှယ်မှု အစွန်းထွက် အမြတ် ရလဒ်အဖြစ်
website တစ်ခုအသွင် မပီပြင်နိုင်သေးခင် ၀ါးပေါင်းကူး blog အဖြစ်
Burmese Poetry Foundation ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။
၀န်နဲ့အား မျှနိုင်သမျှ ကလေးနဲ့ပေါ့။ "
လို့ စကားဦးသန်းထားတဲ့ ဒီ နေရာလေးမှာ
ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ အရေပြားပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ လှပမှုတွေကို ကျောခိုင်းပြီး
ဘ၀ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံး အတ္တတရား ကို ရှာဖွေ တူးဖော် ခဲ့ကြပါတယ်။
ကဗျာဆရာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေဟာ အာရုံတရားတွေနဲ့ သာမန်ထိတွေ့မှုပေါ်မှာ ကဗျာ ဖွဲ့လို့မရနိုင်ပါဘူး။
ထိတွေ့ခံစားမှုကို အခြေခံတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ ဒဿနဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အသွေးအသားပါပဲ။
ထင်ရှားကျော်ကြားမှုနဲ့ ပုံနှိပ်စာလုံးအဖြစ် ဖော်ပြခံရမှုကို ဦးတည် ပြီး ကဗျာကို သေးသိမ်စွာ တွက်ချက် နေသူတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရယ်မောပစ်လေ့ရှိပါ တယ်။
ကဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဒီ့ထက်ပိုမိုကျယ်ဝန်း ခဲ့ပါပြီ။ ဘ၀ရဲ့ ဝေဒနာကို အနက်ရှိုင်းဆုံးဟု ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ကဗျာဆရာသာ သမိုင်းရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ လှပစွာ ကျန်ရှိပေလိမ့် မယ်။
ကျွန်တော်ကဗျာရေးတာဟာ'မပြောတတ်တဲ့စကားကို ပြောဖြစ်အောင် ပြောကြည့်တာ'ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ကဗျာရေးတာဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ စာနာမှု ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ကဗျာရေးတာဟာ'ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ ဘာသာစကား တွေကို ပြန်ဆန်းစစ်တာ'ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ကဗျာရေးတာဟာ'နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်ဘ၀ထဲက ကဗျာမမြည်တဲ့ဟာတွေကို ကဗျာထဲ ထည့်သွင်းလိုတာ'ဖြစ်တယ်။
ပန်းချီကားချပ်ထဲက ဆေးစပ်ခက်တဲ့ အရောင်လို
ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ သိပ်သည်းလွန်းတဲ့ အနက်လို
လေတိုက်တိုင်း မနွဲ့တတ်တဲ့ နှင်းဆီရနံ့
ဘုရားသခင်နဲ့ တစ်လတည်းဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာတော်အောက်မှာ
စိတ် အိုင်းအနာတွေ ရင်းနေရတဲ့ ဥတုရာသီပါ..
တိုက်ခတ်လေကတောင် ထိုးစစ်တွေလို ပြင်းရှ
တဟူးဟူး အရိုင်းဆန်တဲ့ လောကဓံအခင်းအကျင်းထဲ
အရာရာ ဟာ....တဖျတ်ဖျတ် လွင့်မျောတုန်ခါခဲ့..
အလှပဆုံးခွက်ပြထားရတဲ့ ပါးပျဉ်းတစ်ခု လို
သံချပ်ကာ ၀တ်စုံတစ်ခု မလိုပါဘူးးး
ချစ်ခင်ရသော မမ(မနော်ဟရီ) အတွက် စိတ်၏အေးချမ်းသာယာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံလှပသော မွေးနေ့ပေါင်းများစွာစောင့်ကြိုနေပါစေ
သုခရိပ်မြုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့က ဖေါ်ဝပ်မေးလ်တွေကတဆင့် တစ်ချို့က ဘလော့ကို ၀င်ဖတ်မိပြီး ထင်ထားတာထက်စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်း လှူဒါန်းကြတဲ့ အတွက် အတိုင်း မသိ ၀မ်းသာကြည်နူးဖြစ်ရပါတယ်..။
သုခရိပ်မြုံမိသားစုကိုယ်စား မိဘမဲ့ ရောဂါသည်ကလေးလေးတွေရဲ့ကိုယ်စား အားလုံးကို
အခု ပိုစ့်လေးကတော့ သုခရိပ်မြုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲလေးပါ သုခရိပ်မြုံ(၂) လို့ နာမည်ပေးထားတာ ကတော့ နောက် သုခရိပ်မြုံနဲ့ပတ်သက်သမျှ ကို အလျင်းသင့်သလို ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပါ..။
သုခရိပ်မြုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့လည်း ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်..။
အားလုံးသဘောပေါက်ကြတဲ့ အတိုင်း အချိန်က အဓိကကျနေတော့ အခုလောလောဆည် မကြာမှီ လာမည် မျှော်.....လို့ပဲပြောနိုင်ပါသေးတယ်..။
သုခရိပ်မြုံကို တိုက်ရိုက်သွားမေးပေးတဲ့ မိုးလှိုင်ည ၊
မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးတဲ့ တာဝန်ခံဆရာမ ဒေါ်အေးအေးမြင့် ၊
ဖုန်းနဲ့ နားပူခံပေးတဲ့ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နဲ့ ဆရာမစုထား အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်က သုခရိပ်မြုံအကြောင်းကို
အဖြူရောင် သက်တံကဗျာရွတ်ပွဲမှာ ပြောပြနေတဲ့ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ…အစားအစာ နဲ့ ဆေးဝါး.. ဖြစ်ပါတယ်…
အစားအစာအနေနဲ့ ကလေးငယ်များအား တစ်နေ့ ခြောက်ကြိမ် ကျွေးမွေးပါတယ်…
ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေ သန်မာလာစေနိုင်မယ့် အစားအစာတွေကို
နံနက်စာကို မနက် ၇ နာရီတွင် ကျွေးမွေးပြီး… ပဲပြုတ်ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ …
နံနက် ကိုးနာရီအချိန်တွင် .. အဆာပြေ နွားနို့ ဘီစကစ်
နံနက် ၁၁ နာရီနဲ့ ၁၂ အချိန်တွင် နေ့လည်စာ ထမင်း
နေ့လည် ၂ နာရီ အချိန်မှာ အဆာပြေ အိုဗာတင်းနဲ့ ဘီစကစ်
ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် ညနေစာ ကျွေးမွေးပါတယ်…။
ကလေး(၄၅)ယောက်စာတစ်နေ့ကို စားစရိတ် ငွေ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ကနေ ကျပ်၆၅၀၀၀ ၀န်းကျင်အထိကုန်ကျပြီး
ဆေးဝါးအနေနဲ့ကတော့ ကုထုံးဆေးဝါးများအပြင် အားဆေးအဖြစ် Multivita နဲ့ ပရိုဗီမင် အားဆေးတွေကို တိုက်ကျွေးတယ်လို့သိရပါတယ်.။
နောက် လက်ရှိကလေးလေးတွေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး သီးသန့်
GROUP HOME ပုံစံထားပေးနိုင်ဖို့အတွက် မြေကွက်တစ်ကွက်ဝယ်ပြီး အဆောက်အဦဆောက်ဖို့
အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ ဆရာမစုထားက ပြောပြပါတယ်။
သူတို့လေးတွေ အတန်းပညာဆက်သင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ရောက်နိုင်တဲ့ ပညာအဆင့်အတန်း အထိပြီးမြောက်အောင် ၊
အလှူအနေနဲ့ကတော့ စားစရိတ်ကို အပေါ်မှာ
ဖေါ်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဘယ်အနပ်အတွက်ဘယ်လောက်စသဖြင့်လှူဒါန်းနိုင်သလို
တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀ ကျပ်နှုန်း တစ်လကို ၄၅၀၀၀ကျပ်သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်.
လစဉ်လှူဒါန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ " thukhayeikmyone@gmail.com " ကို
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် ။ ။ ၅၈၁၉၅၅
(၁) ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် (၀၉-၉၉-၂၈၅၄၉ ,၂၀၅၄၅၁)
(၂) ဒေါက်တာ ထားထား ( စုထား ) suhtar@gmail.com
( ၀၉-၂၀၁-၇၉၆၁) တို့ဖြစ်ပါတယ်..။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား
ဒီဘလော့လေးမှာ ဆက်လက် ရေးသားတင်ပြပေးသွားပါ့မယ်..။
အစားအစာလေးပဲရရ..အ၀တ်အထည် ၊ ဆေးဝါး.. ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းစရိတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်.
လိုနေတဲ့ ကွက်လပ်ကလေး တစ်ခုခုကိုတော့ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ကောင်းမှာပါ...
အမှတ်တရ အလှူဒါနလေး ဖြစ်နေမှာတော့မှာဖြင့် သေချာနေပါတယ်လေ..။
သုခရိပ်မြုံလေးကို ထင်ထားတာထက်ကို လူတွေစိတ်ဝင်စားပြီး
လှူဒန်းကြတာအတွက် အလွန်ကို ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးမိရပါတယ်..။
လစဉ်ပုံမှန်လှူဒါန်းလိုတဲ့ အလှူရှင်တွေ အသေးစိပ်အချက်အလက်တွေကို
အခု ဒီ့ထက် သေသေသပ်သပ်ဖေါ်ပြနိုင်အောင်
နောက် သုခရိပ်မြုံလေးအတွက် Blog တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်အောင်
ဗမာပြည်ကနေ အစစအရာရာ တက်တက်ကြွကြွကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မိုးလှိုင်ညနဲ့
စင်ကာပူမှာ အဟောအပြောကောင်းကောင်းနဲ့ အလှူခံပေးနေတဲ့ မိုးကုတ်သားတို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း.
အခုလည်း ဒီသုခရိပ်မြုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်.
၂၀၀၆ ခုနှစ် ရတီမဂ္ဂဇင်းမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုလေးပါ..Blog မှာတင်ထားတာလည်း မကြာသေးပါဘူး..အကြောင်းအရာလေးတိုက်ဆိုင်လာတာရယ်.
ရောက်ရှိ သွားကြဖို့ သေချာပါရဲ့လား..။
ဘယ်လို ၀မ်းနည်းခြင်း၊ နာကျည်းခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်းမျိုးမှရှိမနေတော့လောက်အောင် တစ်ကိုယ်လုံး
စိတ်ရောကိုယ်ရောကို ထုထောင်းနင်းချေထာသလိုမျိုး ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကိုယ့်အတွက်အသက်သာ ဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ ၊ ရှုံးနိမ့်ဖို့လုံးဝဥဿုံသေချာနေခဲ့တဲ့ စစ်အေး တိုက်ပွဲကြီး အဆုံးသတ်
တကယ်တော့ ကိုယ် မကြားဝံ့တာ၊ မကြားနိုင်တာ၊ မကြားရဲတာပါ ။ ကိုကိုကျေးဇူးပြုပြီးဘာမှ မပြောပါနဲ့
သူမအပြစ် တွေကိုမညှာမတာကြီးဝေဖန်ပြတတ်တဲ့ချို၊ သူမ ဆယ်တန်းမှာရည်းစားထားတာကိုသိတော့ သူမကို အမေလိုတစည်းနဲနဲဆူပူမန်မဲခဲ့တဲ့ ချိုလေ..။ အခု သိပ်ကိုအောင်မြင်ထင်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာဝန်မကြီးတဲ့ ၊ သိပ်ကိုကျက်သရေရှိ လှပတဲ့အပျိုကြီးတဲ့။ ဘာ သောက၊ ဘာ အနာတရ၊ ဘာ ဒုက္ခတွေနဲ့ မှ
ညစ်ပေစွန်းထင်း ညှိုးနွမ်းသိမ်ငယ်မနေတဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်တဲ့ သမီးလေးရယ်။
”မေရယ်ငါလည်း နာရေးကြော်ငြာဖတ်မိလို့ သိပြီးလိုက်ပို့နိုင်ခဲ့တာ၊တို့တွေမတွေ့တော့တာလည်း
ငါဆေးကျောင်း စ တက် ကတည်းကနော် ၊ နင် အိမ်ထောင်ကျတော့ ငါ နိုင်ငံခြားမှာလေ ၊
”မေရယ် ဆောရီးဟာ ၊ ငါအစဖေါ်ပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်၊ မေတိတ်တော့ ပင်ပန်းပါတယ်
သူငယ်ချင်းရယ် တိတ်တော့နော် ၊ မီးမီးလေးလည်းတိတ်နော် မုန့်မုန့်ပေးမယ် တိတ်နော် ”
သူမ တတွတ်တွတ်ရေရွတ်ပြောဆိုနေသမျှကို မယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန် ၊စိတ်လက်မသက်သာဟန်၊
ယူကျုံးမရဟန် ၊ နာကျင်ကြေကွဲတဲ့ဟန်တွေနဲ့ ငြိမ်သက်နားထောင်နေတဲ့ချိုဟာ သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ရင်း
မျက်နှာကို ချက်ချင်းပြုပြင်ပစ်လိုက် တယ်။ ချို့မျက်နှာဟာ သမားဂုဏ်အင်္ဂါအပြည့်နဲ့
ကိုယ်က နှစ်ရှည်လများ မိန်းမနဲ့ခွဲပြီးအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ လင်ယောက်ျား တစ်ယောက် ကို
ကိုကိုမေ့ကို သစ္စာမဖေါက်ရဘူးနော်လို့ အရေခွံပါးတားမြစ်နေမယ့် ခပ်အူအူ မိန်းမမျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ် ”
”ဟုတ်တယ်ချို ကိုယ် ကိုကိုရက်လည်တဲ့နေ့ကပဲ သွေးသွားစစ်လိုက်တယ် ။ သားကြီးအတွက်ကတော့
စိတ်ချ ရပါတယ် ၊ သားကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ မှ ကိုကိုထွက်သွားတာ၊ ခု သား ရှစ်နှစ်ကျော်ပြီလေ ။”
”တကယ်ဆိုကိုကို့အကြာင်းသိသိချင်းစစ်ရမှာပေမယ့်စစ်ပွဲနှစ်ပွဲကို ကိုယ်တစ်ပြိုင်တည်း ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်
မထင်လို့ ကိုကိုကိစ္စ လုံးလုံးပြီးတဲ့နေ့မှ ကိုယ်သွေးသွားစစ်လိုက်တာ..၊၊ .”
သူမ အသံတွေတုန်ယင်ချင်လာတာကို အံတစ်ချက်ကြိတ်ပြီးထိမ်းလိုက်တယ်။
စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက် တဲ့ ချို့ လက်ကိုတော့ အသာလှမ်းကိုင်ပြီးတားလိုက်မိတယ်။
” ဒါ ဒါ ပေ မယ့်..ကိုယ် သမီးလေးကိုတော့ တစ်နှစ်ခွဲ မပြည့်သေးလို့ သွေးစစ်လို့မရသေးဘူးတဲ့ချို
ကိုယ် လေ...ကိုယ် ”
” ပြောစမ်းမေ မင်းရင်ထဲမှာ ရှိနေတာတွေ ချို့ကိုပြောစမ်း ၊ ပြော ဘာပြောချင်လဲ ၊ ငါ ဘာတွေကူညီရမလဲ ၊
ငါ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကူညီမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်....”
သူမမေးဖျားကိုကိုင် မျက်ဝန်းချင်းစေ့စေ့ဆိုင်ပြီး တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်တဲ့ ချို့စကားတွေကြောင့်သူမ ဆောက်တည်ရာပြန်ရသွားခဲ့တယ်။
သူမ အဆင်သင့်ဖြစ် နေအောင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ အခြေအနေလေ..။
” မတော်တဆ သမီးလေးမှာ ရောဂါပိုးရှိနေခဲ့ရင် မင်း သမီးလေးကို မွေးစားထားပေးပါလားချို ၊
ကိုယ် ကိုယ် .. တစ်ခုခု ဖြစ်သွားပြီးရင်လေ....”
” ဘယ့်နှယ့်မေရယ် ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူဟာ ရောဂါရှင်မဟုတ်သေးဘူးလေ..၊ CD4 Count အရေအတွက်ကို
စစ် ကြည့်ရမယ်..။ ARV ဆေးတွေကို မှန်မှန်သောက် ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပြီး အစားအသောက်ကို စာရင်းဇယား အတိုင်းစားရင်....”
အို အဲဒီ့စကားလုံးတွေဟာ ကိုယ် ကိုကို့ ကို ပြောနေကျစကားလုံးတွေပေါ့ ချိုရယ်.....။
မင်းလိုဆေးပညာဝေါဟာရ တွေနဲ့ စနစ်တကျကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီ့ စကားလုံးတွေကို
ကိုယ် ကိုကို့ ကိုအထပ်ထပ်ပြောခဲ့တာ...။
သူမ လေးလေးကန်ကန်ကြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ မင်း နို့ရော တိုက်ခဲ့သေးလားဟင်..လို့
အားတက်သရော ဆက်မေးရှာတယ်။ အသံတိတ်သွားတဲ့ သူမရဲ့အဖြေကို ချိုက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချရင်း...
ဟုတ်ပါ့မလားချိုရယ် ၊ ဟုတ်ပါ့မလား....။ ကိုယ် ဒီဘ၀မှာဒီ့ထက်ပိုပြီးမကျဆုံးပါရစေနဲ့ ၊
ဒီ့ထက်ပိုပြီး မဆုံးရှုံး ပါရစေနဲ့...။
သမီးလေးကို ၊ သမီးလေးကို မင်းလက်ထဲမှာထားခဲ့ရမှလည်း ကိုယ် စိတ်ချနိုင်မှာပါချို......၊
သမီးလေး သက်တောင့်သက်သာ၊ အတွေးစကိုတိကနဲဖြတ်ချပစ်လိုက်ဖို့ သူမ ခပ်ကြောင်ကြောင်
” ချို CD4 Count သာမန်ကနေ လးငါးရာလောက်ကျချင်ကျနေနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ
ဘယ်လောက်အထိ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဦးမလည်းဟင် ....”
သူ့သမီးဟာ သိပ်ချောသိပ်လှတာ၊လင်ကောင်းသာကောင်းရပြီး အခုဆို ရန်ကုန်မှာကြီးပွားနေတာ၊
သူ့မြေးလေး တွေက ဗိုလ်လေး ဗိုလ်မရုပ်ကလေးတွေလို သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာလို့ အမြဲလို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား ပိတိဖြစ်နေတတ်တဲ့အမေ့ကိုသူ့သမီးရဲ့အလူးလူးအလိမ့်လိမ့်ကျဆုံးခန်းအကြောင်း ဘယ်လိုပြောထွက်ပါ့မလည်း ချို…..။
” ကိုယ် အမေ့ကို ကိုကိုက တီဘီကနေ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်သွားတာလို့ ၊ ကိုယ်ကတော့ တီဘီနည်းနည်း
ကူးချင် သလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ ပြောထားလိုက်တယ်ချို....”
ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ရောက်ချလာတဲ့သမီးကို ပိန်သွားလိုက်တာသမီးရယ် ဆိုတဲ့မှတ်ချက်နဲ့ အမေနဲ့
အဒေါ်လေး လုပ်သူက ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုကြရှာတယ် ။
တဒင်္ဂတော့သူမသောကအားလုံးကိုမေ့ပျောက်ပြီးဟိုး...ဆယ်တန်းကျောင်းသူမဘ၀လောက်ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ ..။
သူမ ဆတ်ကနဲတုန်သွားမိတယ် ၊ အမေ ယာသူမကြီးက အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကိုပါ
ကူးစက်ရောဂါ ထင်နေခဲ့တာ ပါလား..။ သူမအတွက်တော့ တစ်မျိုးကောင်းတာပေါ့လေ..။
သမီး က မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်ဆိုတော့ ရှိတာလေးတွေတိုးအောင်ပွားအောင် အမေပဲစီစဉ်ပေးနော်
ဆိုပြီး သူမ က ငွေတွေကို အမေ့လက်ထဲထည့်လိုက်တော့ အမေက ဂုဏ်ယူတဲ့အပြုံးမျိုးကို တသိမ့်သိမ့်ပြုံးလို့ ။
အမျိုးသမီးကြီးဟာ ဘယ်လောက် ဆောက်တည်ရာမဲ့ကြေကွဲရဦးမှာပါလိမ့်......။
မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ဝမ်းနည်းသိမ်ငယ်စိတ်ဟာ ကလေးသူငယ်တွေကို ဘယ်အချိန်ဘယ်အရွယ်လောက်မှာ
လက်သာ တဲ့နေရာမှာ ပျော်တတ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဖွားဖွားကြီးနဲ့ ၊ဖွားဖွားလေးတို့ရဲ့
အလိုလိုက်အရေးပေးမှုအောက်မှာ ရွှင်လန်းပျော်မြူးနေတဲ့ သားကြီးကိုကြည့်ရင်း လောလောဆယ်
အတွက်တော့ သူမ စိတ်အေးသွားမိတယ်။
ကားအရုပ်ကလေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့ သားကြီးဟာ
အင်ဂျင်နီယာကြီးများ လုပ်ချင်နေဦးမလား...။ ဟင့်အင်း သူမကတော့ဆရာဝန်ကြီးပဲလုပ်စေ့ချင်ပါတယ်။
သူမပြန်ခါနီး အမေ့ခြေဖမိုးကို မျက်နှာအပ်ပြီး မျက်ရည်သွယ်သွယ်ကျခဲ့ပေမယ့် ၊
သား မေမေက အရုပ်သွား ၀ယ်ပြီးပြန်လာမှာဆိုလို့ကြည်ကြည်သာသာနဲ့လက်ကလေးပြပြီးကျန်ရစ်တဲ့သားကို နင့်နေအောင်နမ်းမွှေးလိုက်ချင်စိတ်ကိုတော့ အောင့်အည်းနိုင်ခဲ့ပါရဲ့လေ..။
”ကိုယ်နေကောင်းပါတယ်ချိုရဲ့၊ကိုယ်ဆေးလည်းမှန်မှန်သောက်ခဲ့တယ်၊ကော်ဖီလည်းမသောက်ပါဘူး၊ လေ့ကျင့်ခန်း လည်းလုပ်ပါတယ်၊ အား ရှိ တာတွေ လည်းစားခဲ့ပါတယ် ။”
အခုကိုယ်နေတဲ့တိုက်ခန်းကို အဆောင် ပုံစံပြင်ဆင်ပြီး အဆောင်ငှားဖို့ ၊ ကိုယ့်တူမ ဆရာမနဲ့တိုင်ပင် ထားခဲ့ဘူး တယ်လေ..။နောက် ကိုယ် လက်ဝတ်လက်စားတွေကို အာမခံဌာနမှာအပ်ဖို့ ၊
နောက် ကိုယ်ဈေး ပေါပေါရတုန်းက ၀ယ်ထားခဲ့တဲ့ တောင်ဒဂုံက မြေကွက်ကလေးတွေ
တစ်ချို့ဆို ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းတောင် ကိုယ်မသိသေးဘူး၊ အဲဒါလေးတွေကို ရောင်းပြီး
ကိုယ် တို့စရိတ်တွေနဲ့ တော်တော်လျော့သွားတဲ့ ဘဏ်စာရင်းကို ငွေသားပြန်ဖြည့်ထားနိုင်ဖို့ ၊
နောက် ကိုကို့ သူငယ်ချင်း ရှေ့နေ တစ်ယောက် နဲ့ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေကို တရားဝင်ဖြစ်စေဖို့.....။
ဘ၀ရဲ့ အေးငြိမ်းရာထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ ဖတ်ဖူးကြားဖူးခဲ့တဲ့အာနာပါနသတိပဌာန် ဆိုတဲ့တရားတော်ကို
တွေး တော မနေတော့ပါဘူးလေ....။ ။
သုခရိပ်မြုံ HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာ
အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ အဆောက်အဦးလေး ကတော့ HIV ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့
အဲဒီ့အဆောက်အဦးလေးကို ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာအုတ်မြစ်ချအခြေတည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊
အခု အဲဒီ့အဆောက်အဦးထဲမှာ ကလေးလေး(၄၅)ယောက်အထိရှိသွားခဲ့ပါပြီ.။
သူတို့လေးတွေဟာ အသက် တစ်နှစ်ခွဲ ကနေ ၁၅ နှစ်အထိ အရွယ် အသီးသီးရှိကြပါတယ်.။
ကံကြမ္မာချထားပေးရာထိတ်လန့်စရာဘ၀တွေနဲ့ ကိုယ့်အနာဂါတ်ကိုမသိရှာကြတဲ့ ကလေးလေးတွေ.
အပေါ်ကပုံလေးကတော့ ကာတွန်းဆရာကိုစိုးသော်တာ ကာတွန်းရုပ်ကလေးတွေ ဆွဲပြနေတာကို
တစ်ချို့က စာအုပ်တွေဖတ် ကဗျာရွတ်တာနားထောင်ရရင်ပျော်လို့
တစ်ချို့လေးတွေက သူတို့နာမည်မေးရင်တောင် သူတို့ကြိုက်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးနာမည်ကို
ဘယ်လို ထွန်းလင်းပြမယ့် ကြယ်စင်တွေများလဲ.....။
၀န်ထမ်းသူနာပြုဆရာမ၊ကျောင်းဆရာမမေမေတွေ (၁၈) ယောက်ရဲ့ ယုယအုပ်ထိမ်းမှုအောက်မှာ
မူကြိုအရွယ်ကလေးတွေအတွက် မူကြိုကျောင်း နဲ့ သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ ကလေးငယ်တွေအတွက် ၀ိသာခါသီလရှင်ပညာဒါနကျောင်းမှာ နာမည်စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး
သူတို့ဘ၀လေးတွေရဲ့ လိုနေသမျှ ရုပ်ကွက်လပ်၊ စိတ်ကွက်လပ်တွေကို
မေတ္တာရှင်တွေက ကရုဏာရှေ့ထားလှူဒါန်းကြတာလေးတွေနဲ့ ထပ်တူနီးပါး
တစ်လကို ဆေးဖိုး ၊၀န်ထမ်းစရိတ်နဲ့ အထွေထွေကုန်ကျမှုတွေမပါဝင်သေးပဲ
ငွေကျပ် တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကျော် ရှိတယ် လို့လဲသိရပါတယ်.။
မြန်မာပြည်မှာ အဖြူရောင်သက်တံ့ ဆိုတဲ့ စာပေ ဂီတ ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့
အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး သုခရိပ်မြုံအတွက် အလှူငွေများကောက်ခံပေးပြီး
ဒီအဖွဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့မှုများကိုတော့ ဒီ Link ကတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရင်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်..။
"" ကလေးလေးတွေ အတွက် မိဘသဖွယ်မေတ္တာ ပေးနိုင်မယ့်သူတွေရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ သူတို့ လေးတွေရှင်သန်နေကြပါတယ်..။
သုခရိပ်မြုံမိသားစုနဲ့ ကရုဏါရှင်တွေရဲ့ မေတ္တာရိပ်အောက်မှာ ကလေးလေးတွေ
ကလေးသူငယ်များရဲ့ အခွင့်အရေး ကို
အခုလှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ""
လို့် ဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀မ်းပန်းတသာ စကားကြုံပါးပြောကြားခဲ့ပါတယ်.။
အခုဒီပိုစ့် လေးကိုဖတ်မိပြီး သဒ္ဒါပေါက်ခဲ့ရင်
အခုဖေါ်ပြထားတဲ့ လိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေကတဆင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း
ဒီနေရာဒီပိုစ့် လေးကနေ ကုသိုလ်ယူသတင်းပေးလိုက်ပါရစေ.။
(၂) ဒေါက်တာ ထားထား ( စုထား )
အခု ဒီပိုစ့်လေးမတင်ခင် မေးလ်ကိုဖတ်ပြီး သဒ္ဒါပေါက်လာတဲ့ အလှူရှင်များကတော့
ကိုသစ်ကောင်းအိမ် - US$ 100
ကိုဆောင်းယွန်းလ - US$ 50
ကိုမင်းသုခ- S$ 100
မ မနော်ဟရီ-- S$ 100
မိုးကုတ်သား- S$ 50
ခရေတွန် - US$ 500
ဖိုးစိန် - S$100
ကိုဝင်းဇော်လှိုင် + အိန္ဒြာ - S$100
မယ်ကိုး - S$50
Mr. Neo+ Ms. Lucy - S$ 200
မနန်းဧကရီ - S$100
မေသူ - S$50
မေဇင် - S$20
ကိုဇော်မျိုးအောင် - S$50
ကိုဇင်မင်းသူ+မခိုင်ခိုင်ဇာ - S$50
ငွေအိမ်စံ - S$150
မမီး(မိုးသောက်ကြယ်) - S$50
လိမ္မော်+ချစ်သူ - S$30
နန်းသန္တာ - S$25
အဆိပ်ခွက် - S$20
နွေးနေခြည် - S$20
ဇင်မာ - S$20
မြစ်ကျိုးအင်း - S$100
နိုင်ဝင်း - S$50
Zephyr - S$100
မက်မက် - S$50
Khant Khant Chein - S$50
မယ်လိုဒီမောင် - S$ 50
ကိုသုခ+မမေကဆုန် - S$20
MHZ+KZPK - S$30
သက်နိုင် - S$10
ကိုသောင်းစံ+မပိုးရည်မွန် - S$30
ဟန်သီဆု - S$50
ကိုဇာနည်+ယုယု S$ 100
သိရိထွန်း - S$ 100
ရန်နိုင်+ နေခြည်ပွင့် S$ 15
နမ်းမဝ(အဖြူရောင်နတ်သမီး) S$ 100
ဖန်နေ၀န်း S$ 30
တသက်တာ S$ 50
စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၅၀) နဲ့ စင်ကာပူဒေါ်လာ(၂၂၈၀) တိတိ
စာရင်းရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သုဓုခေါ်မုဒိတာပွားနိုင်စေဖို့ တစ်လက်စတည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
အခု ဒီပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီး သဒ္ဒါပေါက်လာခဲ့ရင်တော့
ကိုသစ်ကောင်းအိမ်(၂၆၀ ၄၀၃ ၆၄၇၄၊၇၂၇ ၂၃၇ ၈၁၄၈)
အိန္ဒြာ(၀၆၅ - ၉၁၇၉၆၅၄၂)
မိုးကုတ်သား(၀၆၅ - ၈၁၁၈၉၁၆၀)
ကိုYမြစ်ချို ( ၈၂၁၀ ၈၇၁၄ ၇၀၁၉ )
ကိုစံဖဲ ( ၈၂၁၀ ၇၅၈၅ ၅၃၅၄)
ခရေတွန် (+၆၀၁၆ ၆၀၄၀၄၀၀ )တို့ထံမှာ
ငွေကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရိလ (၇)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစုကြမှာဖြစ်ပြီး ၊
ဇန်န၀ါရီ (၁၀)ရက်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကို လွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်..။
အလှူခံကျေးဇူးတင်လွှာကို မေးလ်ကနေ တစ်ဦးချင်းစီပို့ပေးပါ့မယ်.။
အသေးစိတ်သတင်း အသေးစိတ် စာရင်းကိုတော့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..။
မထင်မှတ်ပဲ ဖေါ်ဝပ်မေးလ်တွေကိုဖတ်ပြီးလှူဒါန်းကြတာတင် တော်တော်များများလက်ခံရရှိလိုက်တော့
အတိုင်း မသိဝမ်းသာမိပါကြောင်းနဲ့ အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများ အလှူ့ရှင်များ၊
သူတို့လေးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတ သိရှိသွားကြသူများ အားလုံးကို
ကလေးလေးတွေအတွက် ရွတ်ဆိုရေးဖွဲ့ ခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာရှည် ၃ ပုဒ်ကိုလည်း ဒီကဏ္ဍလေးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်